IWayin Yethula Umbani Ngokushesha Izindaba Zomphakathi | Martech Zone
Ukukhangisa kwedijithali kufinyelele esicongweni. 50% yabantu abadala bagweme ngenkuthalo izikhangiso kumaselula nakideskithophu kanti amanye ama-47% agwema ngenkuthalo izikhangiso ezingaphakathi nohlelo. Lezi izinombolo zokushayela ithuluzi likaWayin, Izindaba Zomphakathi, ithuluzi elibalulekile labakhangisi bomkhiqizo nabakhangisi.
Namuhla, uma abasebenzisi ku-Instagram bachofoza noma baswayipha phezulu kufayela le- Indaba exhasiwe, kuvame ukuthatha okugcwele imizuzwana emihlanu ukuze iwebhusayithi yomkhiqizo ilayishwe ngaphakathi kohlelo lokusebenza. Abasebenzisi beselula baphelelwa yisineke, bakhungatheke futhi babuyele kuhlelo lokusebenza, futhi ama-brand ahlushwa amazinga aphansi wokuchofoza nokubandakanya.
Izindaba Zomphakathi iyithuluzi elivumela ukuthi imikhiqizo ilayishe okuqukethwe okunegama ngesivinini sokurekhoda nangokwemvelo ngaphakathi kohlelo lokusebenza, kunokuyisa kancane umsebenzisi kuwebhusayithi yomkhiqizo. Okwezimpawu, lokhu kuveza ukuzibandakanya okuphezulu nokuguqulwa ekubizelweni esenzweni ngaphakathi kwezindaba ezixhasiwe.
Izindaba Zomphakathi ekugcineni zivumela imikhiqizo ukwengeza okuqukethwe okuxhasiwe Izindaba ze-Instagram ne-Snapchat. Ithuluzi lidlulisa ulwazi lomkhiqizo ngejubane lokurekhoda, elenza okuqukethwe okuxhasiwe kube okuhlangenwe nakho okucwilisayo kwabathengi. Okwemikhiqizo, lokhu kuveza ukuzibandakanya okuphezulu nokuguqulwa ekubizelweni esenzweni ngaphakathi kwezindaba ezixhasiwe.
Namuhla, uma umthengi echofoza noma eswayipha phezulu endabeni exhasiwe, ibaqondisa esikrinini esingenalutho lapho kuhlala kuthatha imizuzwana emihlanu ephelele ukuthi iwebhusayithi yomkhiqizo ilayishwe ngaphakathi kohlelo lokusebenza. Ukubambezeleka kunciphisa ulwazi lwamakhasimende ngalo mkhiqizo futhi kuvame ukushiya abathengi bekhungathekile ngokwanele ukuthi bathuthele kokunye. Izindaba Zomphakathi zikuxazulula lokhu ngokunikeza umuzwa oshesha njengombani ongalayisha ngokushesha okuqukethwe komkhiqizo ngokwendabuko ngaphakathi kwepulatifomu, kwakheke umuzwa womsebenzisi ongenamthungo. URichard Jones, isikhulu esiphezulu seWayin
Ngokwengeziwe, Izindaba Zomphakathi zinamakhono athuthukile okufaka ama-sweepstake, imibuzo kanye nemishini yokuwina esheshayo ezindabeni, ivumela imikhiqizo ukuthi iqoqe idatha ye-PII yenkampani yokuqala ukuze ibe nokuhlangenwe nakho okwenziwe kwaba ngokwakho, futhi ekugcineni, amanani aphezulu wokuchofoza.
Izindaba zeDemo Wayin Zomphakathi
Tags: idatha yephathi yokuqalainstagramIzindaba ze-instagramisikhangiso seselulaezokuxhum mobileindaba yomphakathi ephathekayoisikhangiso esikhokhelwayorichard jonesizindaba ze-snapchatizindaba zenhlaloindaba yomphakathiIndaba exhasiweindlela